Toobad keena, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
contrition (sidoo kale loo tarjumay «qalin-jabinta») xagga ilaaha nimcada leh waa qalbi is badal, oo ay keento Ruuxa Quduuska ah oo ku xidhnaa Ereyga Eebbe. Toobaddu waxay ku lug leedahay ka warqabka dembigiisa qof waxayna la socotaa nolol cusub, oo quduus looga dhigay rumaysadka xagga Ciise Masiix. (Falimaha Rasuullada 2,38; Rooma 2,4; 10,17; Rooma 12,2)
Baro sida loo garto toobadda
Cabsi aad u weyn, ”ayaa ahayd tilmaanta nin dhalinyaro ah cabsidiisa weyn ee ah in Ilaah uga tagey dembiyadiisa soo noqnoqda awgood. "Waxaan u maleynayay inaan ka qoomameeyay, laakiin waan iska sii waday," ayuu yidhi. «Xitaa ma aqaano haddii aan runtii aaminsanahay, maxaa yeelay waxaan ka walaacsanahay inaan Ilaah mar dambe la i cafin doonin. Si kasta oo ay daacadnimadayda toobad keeniddu u muuqato, weligeed uma muuqato inay ku filan tahay. »
Aynu eegno waxa injiilku runtii macnaheedu yahay markay ka hadlayso toobadda xagga Eebbe.
Qaladkii ugu horreeyay waxaan sameyneynaa markaan isku dayno inaan fahanno ereygan anagoo adeegsaneyna ereybixin guud oo aan ka qoomameyneyno ereyga (ama toobad keen) fur. Waxaan xitaa ka heli karnaa tilmaam ah ereyada shaqsi ahaaneed in lagu fahmo iyadoo loo eegayo waqtiga loo daabacay majaajillada. Laakiin qaamuuska qarniga 21-aad si dhib yar buu noo sharixi karaa waxa qoraagu yahay, tusaale ahaan, B. Wax ku qornaa af Griig ah oo horay loogu hadli jiray Aramaic 2000 sano ka hor.
Qaamuuska 'Newster' ee New Collegiate Dictionary wuxuu ka qoomameynayaa waxyaabaha soo socda: 1) Ka leexashada dembiga iyo ka go'an horumarinta nolosha; 2a) murugo dareentid ama murugo; 2b) Isbedelka aragtida. Buug-yaraha Brockhaus wuxuu qeexayaa wax laga qoomamo sida soo socota: "Ficil weyn oo tawbad keena ... wuxuu ka kooban yahay ku-dhawaaqista dembiyada la galay iyo ujeedka ah inuusan mar dambe dembaabin."
Qeexida ugu horreysa ee Webster waxay ka tarjumaysaa sida dhabta ah ee dadka diinta leh ay u maleeyeen inuu Ciise ula jeedo markuu yiri "toobad keena oo rumee". Waxay u maleeyaan inuu Ciise ula jeeday dadkaas kaliya ee joojiya inay dembaabaan oo beddelaan jidadkooda ayaa ku jira Boqortooyada Ilaah. Xaqiiqdii, waa sax waxa Ciise uusan oran.
Markay noqoto tawbadkeenka, khaladka guud ahaan waxaa la sameeyaa inaad u maleynayso inay ka dhigan tahay joojinta dembiga. "Haddii aad runtii ka qoomamoon lahayd, adigu dib uma aydnaan sii yeelan laheyd," waa diidmada joogtada ah ee ay nafaha dhibku ku maqlaan qeybta macnaha wanaagsan, la-taliyayaasha xagga diinta ee waajibka ku ah. Waxaa naloo sheegay in tawbadkeenku "wareejiyo oo dhinaca kale u gudub". Oo sidaas ayaa lagu sharxaa isla neefta sida ka leexashada dembiga iyo u leexashada nolosha addeecitaanka sharciga Ilaah.
Markay tani si adag u xafiday, Masiixiyiinta leh ulajeeddooyinka ugu wanaagsan ayaa ku baxay inay beddelaan jidkooda. Iyo sidaas darteed markay xajkooda ku jiraan qaabab qaarkood waxay u muuqdaan inay isbedelayaan, halka kuwa kalena ay u muuqdaan inay ula mid yihiin sidii xoogaa koollo ah. Xitaa wadooyinka badalaya waxay leeyihiin tayo muuqata oo dib u soo kabasho.
Ilaah miyuu ku qanacsan yahay dhexdhexaadnimada u hogaansanaanta noocaas ah? "Maya, maahan," wacdiyuhu wuu ka digayaa. Iyo wareegga naxariis darrada ah ee cibaadada, guuldarrooyinka, iyo rajo-beelka oo curyaaminaya injiilka ayaa u gudbaya wareegga xiga, sida giraangiraha qafiska hamster.
Waana mid sax ah markii aan niyad jabsan nahay oo aan niyad jabsan karno sababtuna tahay guuldarradeenna inaan ka soo baxno heerarka sare ee Ilaah ee aan maqalno wacdi kale ama aan aqrino maqaal cusub oo ku saabsan "toobadda dhabta ah" iyo "toobadda qoto dheer" iyo in toobadkeenu uu yahay ka-fogaansho dhammaystiran dembiga.
Oo sidaas daraaddeed waxaan mar kale ku dhacno annagoo u heellan inaan isku dayno inaan wax walba qabsanno oo aan weli ku dhammaanno isla dhibtii, natiijooyinka la saadaalin karo. Marka jahwareerka iyo rajo-beelku way sii kordhayaan maxaa yeelay waxaan ognahay in ka-tagitaankeenna dembigu yahay wax uun "dhammaystiran".
Oo waxaan u nimid go'aan ah inaanan "dhab ahaan qoomameyneynin" in qoomamadeena aysan "qotodheer" ahayn, oo aan "halis aheyn" ama aysan "daacad ahayn" ku filan. Oo haddii aan runtii aan toobad keenin, markaa annaguna ma yeelan karno rumaysad dhab ah, taas oo macnaheedu yahay runtii innagu kuma dhex jirin Ruuxa Quduuska ah oo nagu dhex jira, taasoo micnaheedu yahay inaanan xitaa badbaadinayn.
Ugu dambeyntiina, waxaan u nimid heer aan ku baranay inaan ku noolaano sidan oo kale, ama waxaan ku tuuranaa shukumaan, sida inbadan ay sameeyeen, oo aan uga leexanno bandhigyada caafimaad ee aan waxtar lahayn ee dadku ugu yeedhaan «Masiixiyada».
Ma aha in la sheego masiibada halkaas oo dadku runtii aamminsan yihiin inay noloshooda nadiifiyeen oo ay iyaga ka dhigteen inuu Ilaahay aqbalayo - xaaladdoodu aad bay uga sii xun tahay. Toobad keenista xagga Eebbe micnaheedu maaha wax xidhiidh ah kuma lahan naftiisa cusub.
Toobad keena oo rumee
Toobad keena [toobad keena] oo rumaysta injiilka! ”Ciise wuxuu ku sharaxay Markos 1,15. Toobad keena iyo iimaanku waxay calaamad u yihiin bilowga nolosheena cusub ee boqortooyada Ilaah; uma aysan qabanin maxaa yeelay waxaan sameynay wixii saxda ahaa. Waxay calaamad u yihiin sababta oo ah waqtigaas nolosheenna ee miisaanka ayaa ka soo dhacaya indhahayaga mugdiga ah waxaanan ugu dambeyntii Ciise ku aragnaa iftiinka ammaanta xorriyadda carruurta Ilaah.
Wax kasta oo loo baahan yahay in loo sameeyo dadka si loo helo cafiska iyo badbaadada ayaa horeyba loogu sameeyay dhimashadii iyo sarakicidda wiilka Ilaah. Waxaa jirtay wakhti ay runta nooga qarsoonayd. Maaddaama aan u indha la 'nahay, kuma raaxeyn karno oo aan ku nasan karno.
Waxaan u maleynay inaan helno dariiqa adduunyada nafteena, dhamaanteen waxaan u isticmaalnay xooggeena iyo waqtigeenna sidii aan ugu fududaadeyn laheyn geeska yar ee nolosha, sida aan awoodno.
Dhammaanteenna waxaan diirada saareynay inaan sii noolaano oo aan mustaqbalkeena sugno. Waxaan si adag ugu shaqeynay in la ixtiraamo oo la ixtiraamo. Waxaan u dagaalamay xuquuqdeena, anagoo isku deyeyna inaan si xaqdarro ah u khaldamin qofna ama wax kale Waxaan u dagaallamay si aan u ilaalino sumcadeena wanaagsan iyo in qoyskeena iyo habkeenkeenna iyo hantideena la badbaadiyo. Waxaan sameynay wax kasta oo aan kari karno si aan nolosheena u qiimeynno, inaanan ahayn kuwa guuleystay, oo aan ahayn kuwii khasaariyey.
Laakiin qof kasta oo weligiis noolaa, tani waxay ahayd dagaal lumay. In kasta oo dadaalkeenna, qorshayaashayada iyo shaqadeena ugu wanaagsan, annagu nolosheenna ma xukumi karno. Kama hortagi karno musiibo iyo musiibo, ama fashilaad iyo xanuunno ka imanaya cirka jannada oo baabi'inaya hadhaagii si uun isugu rogay rajo iyo farxad.
Ka dib maalin maalmaha ka mid ah - sabab kale oo aan ahayn in isagu doonayey - Eebbe ha nala arko sida arrimuhu runtii u socdaan. Adduunku isagaa iska leh, innaguna isagaa leh.
Dembiilayaal baannu ku dhimannay, ma jiro jid aan uga baxno. Waxaan nahay kuwo lumay, indhoolayaal indhoolayaal ah adduunyo lumay oo buuxa, kuwa lunsan indha la 'sababtoo ah waxaan u la'nahay dareenka qabashada gacanta keliya ee leh meesha looga baxo. Laakiin taasi waa hagaagsan tahay, maxaa yeelay iskutallaabtiisii ​​iyo sarakiciddiisa ayuu inagaga khasaaray; oo waxaynu noqon karnaa mid guuleysta isaga markaan la midowno dhimashadiisa si aan sidoo kale uga mid noqon karno sarakiciddiisa.
Si kale haddii loo dhigo, Ilaah wuxuu ina siiyay war wanaagsan! Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inuu isagu shaqsiyan qaatey qiimaha weyn ee nafteena, daacada, baabi'inta, waalaga xun. Isagu wuu soo furtay innagoo aan fiirsanaynin, wuu ina dhex maydhay, oo caddaalad buu noo hagaajiyey, oo wuxuu inoo hagaajiyey meel miiska cuntadiisa weligiis ah. Isaga oo adeegsanaya erayga injiilkan, wuxuu nagu martiqaadayaa inaan rumeysanno inay sidaas tahay.
Haddii aad taas ku garan karto oo aad rumeyn karto nimcada Ilaah, ka dib waad toobad keentay. Si aad uga xumaato, waad aragtaa, waxaa loola jeedaa inaad dhahdo: «Haa! Haa Haa Waan rumeysanahay! Waxaan aaminay eraygaaga! Waxaan uga tegayaa noloshayda hamster ah orodka gadaashiisa ku ordaya, dagaalkan aan ujeedada lahayn, dhimashadan, oo aan si qaldan ugu maleeyay inay tahay nolosha. Diyaar baan u ahay nasashadaada, caawi caalimnimadayda! »
Dib u qoomamayn ayaa beddeleysa fikirkaaga. Waxay baddelaysaa aragtidaada inaad isu aragtid inuu yahay udub-dhexaadka adduunka sidaas darteed waxaad hadda u arkeysaa Ilaah inuu yahay udub-dhexaadka adduunka oo naftaada u aamino naxariistiisa. Micnaheedu waa gudbinta isaga. Waxay macnaheedu tahay inaad taaj dhigto cagaha madaxa midig ee cosmos. Waa go'aanka ugu muhiimsan ee aad waligaa gaari doontid.
Waxay ku saabsan tahay anshaxa
Ka qoomameyntu kama hadlayo akhlaaqda; ma ahan dhaqan wanaagsan; kama hadlayo "si ka sii fiican wax u qabashada".
Toobaddu macnaheedu waa inaad ku aaminto Ilaahay bedelka naftaada, sabab la'aan ama saaxiibbadaa, dalkaaga, dowladdaada, qoryahaaga, lacagtaada, awoodaada, maamuuskaaga, magacaaga, gaarigaaga, gurigaaga, Xirfaddaada, dhaxalka qoyskaaga, midabkaaga maqaarkaaga, jinsigaaga, guushaada, muuqaalkaaga, dharkaaga, magacyadaada, shahaadooyinkaaga waxbarasho, kaniisaddaada, xaaskaaga, muruqyadaada, hogaamiyaashaada, IQ-gaaga, hadalkaaga, guulahaaga, taada. Shaqooyinka sadaqada ah, tabarucaada, fadligaaga, naxariislahaaga, edbintaada, akhlaaqdaada, daacadnimadaada, addeecidaada, daacadaada, edbintaada ruuxiga ah ama waxkasta oo aad ku tusi karto inuu adiga laxiriirey waxaanan kaga tagey jumladdan dheer. leeyihiin.
Toobaddu macnaheedu waa "wax walba hal kaar saar" - kaarka "Eebbe". Waxay ka dhigan tahay inuu ku socdo dhinaciisa; waxa uu leeyahay rumaysta; inaad koox isaga raacdid, inaad isaga daacad u ahaatid.
Toobad keenku kuma eka ballanqaadka wanaagga. Maahan mid ku saabsan "ka saarista dembiga noloshiisa". Laakiin waxaa loola jeedaa in la aamino in Eebbe naxariis inoo leeyahay. Waxay ka dhigan tahay in aan Ilaah aaminno inuu hagaajiyo qalbiyadeenna xun. Waxaa loola jeedaa in la rumeeysto in Ilaah yahay kan uu sheeganayo inuu yahay - abuuraha, badbaadiye, furayste, macallin, sayid, iyo nabad ilaaliye. Oo ay macnaheedu tahay in la dhinto - in laga dhinto fekerkeenna khasabka ah ee caddaalad iyo wanaag.
Waxaan ka hadlaynaa xiriirka jaceylka - mana ahan inaan Ilaah jeclaanay, laakiin inuu ina jeclaaday (1 Yooxanaa 4,10). Isagu waa isha asalka ah ee waxaas oo dhan, waa lagu soo daray, oo waxay kuu soo shaacbaxday inuu isagu kuu jecel yahay cidda aad tahay - canugga uu jecel yahay ee Masiixa - dhab ahaan maahan waxaad adigu leedahay ama waxaad ku kacday ama waxa sumcaddaadu tahay ama waxaad u egtahay ama wax alla wixii kale oo tayo leh oo aad leedahay, laakiin kaliya sababtoo ah waxaad ku dhex jirtaan Masiix.
Si lama filaan ah waxna ma ahayn sida ay ahayd. Dunida oo dhan ayaa si lama filaan ah u soo if baxday. Dhamaan guuldaradaada ayaa hada muhiim ah. Wax kasta oo ku jira Masiixa dhimashadiisa iyo sarakicistiisa waa la hagaajiyey. Mustaqbalkaaga weligiis ah waa la hubsanayaa, oo jannada iyo waxa dhulka ku jira oo farxaddaada kaa qaadi kara ma jiraan, maxaa yeelay, waxaad tahay Ilaah xagga Ciise Masiix (Rooma 8,1.38-39). Waad isaga rumaysay, waad aamisay, oo naftaaduu ku riday gacantiis, wax alla wixii yimaada, si kastoo ay tahayba qof ha dhaho ama sameeyo.
Si deeqsinimo leh waad u cafiyi kartaa, u dulqaadan kartaa dulqaad iyo naxariis, xittaa haddii aad khasaaro ama khasaaro ku gaartid - ma lihid wax lumo maxaa yeelay waxaad ku guulaysatay gabi ahaanba wax kasta oo Masiixa ku jira (Efesos 4,32-5,1-2). Waxa kaliya ee adiga kuu muhiim ah waa abuurkeeda cusub (Galatiya 6,15).
Toobaddu maaha ballanqaad kale, ballan qaad ballaadhan oo ah inuu noqdo wiil ama gabadh wanaagsan. Waxay ka dhigan tahay inaad ka go'do dhammaan astaamahaaga weyn ee naftaada iyo inaad gacantaada daciifka ah gacanta u geliso ninkii rogaya hirarka badda. (Galatiya 6,3). Waxay ka dhigan tahay ku imaanshaha Masiixa inuu ku nasto (Matayos 11,28: 30). Micnaheedu waa aaminka ereygiisa nimcadiisa.
Eebbe idmo, ma aha annaga
Toobaddu macnaheedu waa aaminaadda Ilaah, ahaanshaha qofka isagu, iyo waxa uu sameeyo. Toobaddu maaha mid ku saabsan shaqooyinkaaga wanaagsan iyo sidoo kale shaqooyinkaaga xun. Ilaaha xorta ah, oo isagu raba inuu noqdo, ayaa go'aansaday jacaylkiisa uu inoo qabo inaan cafiyo dembiyadayada.
Aynu si cad u caddeynno arrintan: Ilaah wuxuu dembiyadeenna inaga cafiyaa - dhammaan - kuwii hore, waqtigan iyo mustaqbalkaba; isagu ma dhajiyo (Yooxanaa 3,17). Ciise wuxuu inoo dhintay annaga oo weli dembilayaal ah (Rooma 5,8). Isagu waa wankii allabariga loo gowracay oo waa la gowracay annaga midkeen kasta (1 Yooxanaa 2,2).
Toobad keena, waad aragtaa, maahan jidkii loo mari lahaa in Ilaah sameeyo wixii uu hore u qabtay. Hase yeeshe, waxaa loola jeedaa in la aamino in uu sidaas yeelay - in uu noloshaada badbaadiyey weligiis oo uu kugu siiyey dhaxal weligeed ah oo aan qiimo lahayn - iyo rumaynta in jacaylku u qabo isaga in uu ku ifaaxo.
"Dambi dhaaf noo cafi sidaan u cafino kuwa noogu dembaabay," Ciise wuxuu ina baray inaan tukano. Haddii ay noo soo baxday in Ilaah, sababaha ugu hooseeya, uu si fudud u go’aansaday inuu qoro nolosheenna oo ay ka buuxaan kibirsannaanimo is-hoosaysiin ah, dhammaan beeneenna, dhammaan nacaybkeenna, dhammaan kibirkayaga, damacyadeena, khiyaanooyinkayaga iyo damaceenna - dhammaan fikradaheena xun, camalkeenna. iyo qorshayaasha - markaa waa inaan go'aan gaarnaa. Waan ku ammaani karnaa waana uga mahadcelin karnaa jacaylkiisa aan la sharixi karin weligiis, ama waxaan sii wadi karnaa inaan ku noolaano sida ku xusan ujeeddada: «Waxaan ahay qof wanaagsan; qofna uma malaynayo in aniga ahayn aniga - - oo aan sii wadno nolosha hamster orod ku dhex ordaya giraangiraha, kaas oo aan aad ugu dhegan nahay.
Waxaan rumeysan karnaa Ilaah ama aan iska indho tiri karnaa ama aan uga carari karnaa si cabsi ah. Haddii aan isaga rumeysanno, waxaan jidkeenna ugu dhex mari karnaa saaxiibtinimo farxad leh oo aan isaga la qaadanno (isagu waa saaxiibka dambiilaha - dambiile oo dhan, oo ay kujirto qof kasta, xitaa dadka xun iyo sidoo kale saaxiibadeen). Hadaanan aaminin, hadaan u maleyno inuusan dooneyn ama cafin karin, markaa farxad kuma la noolaan karno (oo markaa ma aha qof kale mooyee, marka laga reebo dadka ku dhaqan sida aan u rabno iyaga). Taa bedelkeed, waan ka baqi doonnaa oo ugu dambaynna waan quudhsan doonnaa (iyo sidoo kale qof kasta oo aan inaga fogayn).
Laba dhinac oo isku mid ah
Iimaanka iyo tawbadkeenku waa socdaan. Markaad Ilaah aaminto, laba shay ayaa isku mar dhaca: isku faham inaad dembiile tahay oo u baahan naxariista Eebbe, oo aad doorato inaad aaminto Ilaahay inuu badbaadin doono naftaadana badbaadin doono. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad Ilaah aaminto, sidoo kale waad toobad keentay.
Falimaha Rasuullada 2,38, tusaale ahaan. T., Butros wuxuu ku yidhi dadkii badnaa oo soo ururay: "Butros wuxuu ku yidhi iyaga, Toobad keena, oo midkiin kasta ha lagu baabtiiso magaca Ciise Masiix dembidhaafkiinna aawadiis, oo waxaad heli doontaan hadiyadda ah Ruuxa Quduuska ah." Marka iimaanka iyo tawbadkeenku waa qayb ka mid ah xirmo. Markuu yiri "toobad keenay", wuxuu sidoo kale tixraacay "aaminaad" ama "aamin".
Intaa wixii ka sii dheer ee sheekada, Butros wuxuu yiri: "Toobad keena oo Ilaah u noqo ..." U soo noqoshadan Ilaah waa isku waqti oo laga leexdo naftaada. Micnaheedu maahan inaad adigu hadda tahay
waa damiir ahaan. Waxay ka dhigan tahay inaad ka leexiso himiladaada shaqsiyeed si aad uqalanto Masiixa oo aad bedelkeeda aaminto iyo rajadiisa eraygiisa, wararkiisa wanaagsan, ku sheegiddiisa in dhiigiisa uu yahay badbaadadaada, cafiska, sarakicinta iyo sarakicista dhaxalka weligeed ah ayaa qulqulay.
Haddaad ku kalsoon tahay Ilaahay cafiska iyo badbaadada, waad toobadkeysay. Toobad keena xagga Ilaah waa is beddel ku dhaca fikirkaaga wuxuuna saameeyaa noloshaada oo dhan. Qaabka cusub ee loo fikiro ayaa ah habka lagu aamino in Eebbe sameyn doono waxa aadan sameyn kari weyday malyan nolosheeda. Ka qoomameyntu maahan isbeddel ka imanaya damiir la’aan xagga akhlaaqda wanaagsan - ma awoodid inaad sidaas sameysid.
Askarta wax horumar ah ma sameeyaan
Sababta oo ah inaad dhimatay, ma awoodid inaad sifiican u fiicnaatid. Dembigu wuu ku diley, sida Bawlos ku sharaxay Efesos 2,4: 5. Laakiin in kasta oo aad ku dhintay dembiyadiinnii (dhimashadu waa wixii aad ku soo kordhisay hawshii cafiska iyo madaxfurashada), Masiixu wuxuu kugu keenay nolosha (Tani waa wixii Masiixu ku deeqay: oo ah wax walba).
Waxa kaliya ee dadka dhintay sameyn karaan waa inaysan waxba qaban karin. Uma noolaan karaan caddaaladda ama wax kale maxaa yeelay way dhintaan, iyagoo dembiga u dhintay. Laakiin waa kuwii dhintay - iyo kuwa dhintay oo keliya - oo kuwa kuwii dhintay laga sara kiciyey.
Soobixinta kuwa dhintay waa waxa Masiixu sameeyo. Isagu saliid ma ku shubo meydadka. Kuma uu taageersan yahay inay xidhaan dharka xafladaha oo uu arko haddii ay wax wanaagsan qaban doonaan. Waad dhimatay, ma jiraan wax aad sameyn kartid. Ciise sinaba uma xiise gelin jir cusub iyo wanaajinta. Waxa Ciise sameeyo waa in iyaga lagu kiciyo. Mar labaad, meydadku waa nooca kaliya ee uu soo sara kiciyey. Si kale haddii loo dhigo, sida kaliya ee lagu tago sarakicidda Ciise, noloshiisa, waa inuu dhinto. Maahan dadaal badan in la dhinto. Xaqiiqdii, dadaal looma baahna. Dhimashaduna waa sidaan nahay.
Laxdii lumay looma heli karo kaligeed ilaa adhijirku xanaaneeyo oo uu ka helo (Luukos 15,1-7). Qadaadiicii lumay lama helin ilaa inta ay naagtu baadhay oo ay ka heshay (Aayadaha 8aad). Waxa kaliya ee ay gacan ka gaysteen geeddi-socodka raadinta iyo raadinta iyo xafladda farxadda weyn waxay ahayd in lagu lumiyo. Rajo la’aantooda guud waxay ahayd waxa kaliya ee ay haysteen ee u saamaxaya in la helo.
Xitaa wiilka prodigal ee maahmaahda soo socota (Vv. 11-24) wuxuu sheegayaa in horey loo cafiyey, in dib loo soo furtay oo si buuxda loo aqbalay, si fudud xaqiiqda aabihiis nimcadiisa deeqsinimada leh, ee aan lagu salayn qorshihiisa, sida: «Anigaa lahaan doona Ku dadaal nimcada markale ». Aabihiis wuu ka xumaaday isaga kahor intuusan maqlin ereygii ugu horreeyay ee hadalkiisii ​​"Waan ka xumahay" hadalka (V. 20).
Markii wiilku ugu dambayntii aqbalay xaaladdiisii ​​geerida isla markaana uu ka lumay xaydhkii feedhka, wuxuu ku socday jidka inuu ku helo wax la yaab leh oo waligii run ahaa: aabihii uu diiday iyo kii uu caayay waligii ma uusan helin. joojiyey jacaylkiisa si xasaasi ah oo shuruud la’aan ah.
Aabihiis wuxuu si fudud u iloobey qorshihiisa is-furashada (Aayadaha 19aad). Xitaa isaga oo aan sugin muddo tijaabo ah, wuxuu dib ugu soo celiyay xuquuqdiisa wiilasha oo dhan. Marka xaaladdeena gebi ahaan rajo la’aanta dhimashadu waa tan keliya ee noo oggolaanaysa inaan korno. Dadaalka, shaqada iyo guusha hawlgalka oo dhan waa mas'uuliyadda kaliya ee adhijir, afada, aabaha - Ilaah.
Waxa kaliya ee aan ugu tabarucno geedi socodka sarakiciddeena waa in ay dhintaan. Taasi waxay inaga quseysaa labadaba ruux ahaan iyo jir ahaanba. Haddii aynaan aqbalin xaqiiqada ah inaannu dhimannay, ma aqbali karno xaqiiqada ah inaynu ka soo sarakacay nimcadii Ilaah ee ku jirtay Masiixa. Toobaddu macnaheedu waa aqbalaadda xaqiiqada ah inaad dhimatay oo aad ka heshay sarakicista Masiixa ee xagga Ilaah.
Toobad keena, waad aragtaa, micnaheedu maahan soo saarista shaqooyin wanaagsan oo sharaf leh ama isku day inaad ku dhiirrigeliso Ilaah inuu nagu cafiyo dhowr hadallo qiiro leh. Waan dhimannaa taas micnaheedu waa ma jiraan wax aan sameyn karno oo aan wax ugu kordhin karno dib u soo nooleynteena Waa arrin fudud in la rumeeyo injiilka Ilaah in uu cafiyo oo madax furayo Masiixa iyo isaga oo waliba kuwii dhintay u soo sara kiciya.
Bawlos wuxuu sharraxayaa qarsoodigaan - ama mid la mid ah, haddii aad jeceshahay - dhimashadeena iyo sarakicidda Masiixa, Kolosay 3,3: "Waad dhimatay oo noloshiinnuna Masiixay kula qarsoon tahay Ilaah."
Sirta, ama tahriibka, ayaa ah in aan dhimnay. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku noolnahay isku waqti. Laakiin noloshu, oo ammaanta leh, weli ma jirto: waxay ku qarsoon tahay Masiixa xagga Ilaah, umana muuqan doonto sida ay run ahaantii tahay ilaa Masiixu laftiisa u muuqdo, sida ku xusan aayadda 4aad: «Haddii Masiixu yahay noloshaada , Isaga qudhiisuna wuu muujin doonaa, markaasaad adigu ammaan kula soo muuqan doontaa.
Masiixu waa nolosheenna. Markuu soo muuqdo, waan la muuqan doonnaa isaga, maxaa yeelay ka dib isagu waa noloshayada. Sidaa darteed mar labaad: maydku waxba uma qaban karaan naftooda. Ma beddeli kartid. Ma sameyn kartid "si ka sii fiican". Ma horumarin kartid. Waxa kaliya ee ay sameyn karaan waa dhimashada.
Si kastaba ha noqotee, Ilaaha, oo ah isha nolosha laftiisa, wuxuu ku faraxsan yahay soo saraynta kuwii dhintay, oo isaguna sidaasuu ku sameeyaa Masiixa (Rooma 6,4). Meydadku gabi ahaanba waxba ugama tarin hawshan, marka laga reebo xaaladdooda dhimashada.
Ilaah wax kasta wuu sameeyaa. Waa shaqadiisu iyo isaga kaliya, bilow ilaa dhamaad. Tan macnaheedu waa inay jiraan laba nooc oo mayd ah oo soo kacaya: kuwa ku faraxsan inay helaan madax furashooda iyo kuwa doorbidaya geeridooda nololeed ee nolosha, oo indhaha u xidha si ay u hadlaan, dhegohooda u fura oo u dhinta xooggooda oo dhan. rabto.
Mar labaad, toobadkeenu waa inuu dhaho haa hadiyadda cafiska iyo badbaadada ee Ilaah leeyahay oo aan ku haysano Masiixa. Waxay kuxirantahay tawbadkeenida ama samaynta balanqaadyada ama dambiga galay. Haa waa sidaas. Toobaddu ma aha mid si aan dhammaad lahayn ku noqnoqday "Waan ka xumahay" ama "Waxaan ballanqaadayaa inaanan mar dambe sameyn doonin". Waxaan rabnaa inaan si daacadnimo leh u daacad noqdo. Fursadaha ayaa ah inaad markale sameyn doontid - hadaadan ahayn ficil dhab ah, ugu yaraan fikradahaaga, rabitaankaaga, iyo dareenkaaga. Haa, waad ka xumahay, laga yaabee marar aad u badan, oo runti aadan dooneynin inaad ahaatid qofka ku sii wadata, laakiin taasi runtii ma aha qalbiga qoomamaynta.
Waxaad xusuusataa inaad dhimatay, oo dhimashaduna waxay u eg yihiin kuwa dhintay. Laakiin hadaad dembiga ku dhimatay, waxaad ku nooshahay Masiix isku mar (Rooma 6,11). Laakiin noloshu Masiixa ku qarsoon tahay Ilaah dhexdeeda, oo umay muuqan si joogto ah ama si aad ah badanaa - weli. Ma shaaca ka qaaday waxa ay run ahaantii tahay ilaa Masiixu qudhiisa u muuqdo.
Sidaas oo ay tahay, haddii aad haatan ku dhex nooshahay Masiixa, weli waxaad ku dhiman dembiga wakhtigaas. Waana isla mid naftiisu dhimatay, naftiisi aan u ekaan karin inuu u ekaado sidii qof dhintay, oo Masiixu sara kiciyey oo lala nooleeyay xagga Ilaah - in la muujiyo markii la muujiyo.
Tani waa meesha rumaysadku ka yimaado. Toobad keena oo injiilka rumayso. Labada dhinac waa iska leeyihiin. Mid kale ma haysan kartid. Warka wanaagsan ee rumeynta ah in Ilaah ku maydhay dhiiga Masiixa, in uu kaa bogsiiyey xaaladaada dhimashada, oo kugu soo noolaysiiyey wiilkiisa weligiis macnaheedu waa toobadkeen.
Iyo u jeesashada xagga Ilaah ee caawimaadda ugu weynaantiisa, lumitaankiisa iyo dhimashadiisa, iyo in la helo madaxfurashada furankiisa iyo badbaadadiisa waa in iimaan la rumaystaa - injiilka. Waxay u taagan yihiin laba dhinac oo isla eg. waana qadaadiic uu Eebbe ku siinayo sabab kale - sabab kale mooyee waa inuu isagu xaq yahay oo uu nimco noo yahay.
Dabeecad, ma ahan cabir
Dabcan, qaar baa dhahaya in toobad keena xagga Eebbe laga muujiyo anshax iyo akhlaaq wanaagsan. Ma doonayo inaan ka doodo arintaas. Taa baddalkeed, dhibaatadu waxay tahay waxaan rabnaa inaan cabirno qoomamo ka dib maqnaanshaha ama joogitaanka dhaqanka wanaagsan; waxaana jira isfaham darro daran ee toobad keenka.
Runta dhabta ahi waa inaanu haysan baahiyaha akhlaaqda suuban ama anshaxa; oo wax kasta oo kaamil ah ayaa boqortooyadii Ilaah ku filan.
Waxaan dooneynaa inaan sameyno wax aan micno lahayn, sida: "Haddii toobadkeenu uu daacad yahay, mar dambe dembi ma geli doontid." Taasi waa si sax ah waxa aan ahayn qodobka ugu muhiimsan ee tawbadkeenka.
Furaha towbad keenku waa qalbi is beddalay, naftaada ka fogaa, geeskaaga, mar dambe dooni maayo inaad noqoto loo-shaqeeye kuu gaar ah, wakiilkaaga saxaafadda, wakiilka ururkaaga iyo qareenka difaaca, xagga aaminaada Eebbe inuu dhiniciisaaga taagan yahay. inuu noqdo geeskiisa, inuu dhinto naftiisa iyo in uu noqdo wiil uu jecel yahay oo Ilaah, oo uu isagu cafiyey, oo uu soo furtay.
Ka qoomamaynta macnaheedu waa laba shay oo aanan dabiici ahaan jeclaan. Marka hore, waxaa loola jeedaa in la wajaho xaqiiqda ah in xariiqa heesta "Ilmo, ma fiicna" (adigu caafimaad ma tihid, ilmaha) ayaa si fiican noogu sharxeysaa. Midda labaad, waxay la macno tahay in laga hor imaado xaqiiqda ah inaanan ka fiicnayn qof kasta. Kulligeen waxaan ku siman nahay isla qummanaanta kuwa kale oo dhan ee u dhinta naxariis aan u qalmin.
Si kale haddii loo dhigo, tawbadkeenku wuxuu ku yimaadaa maskax sharaf leh. Niyad jabku waa midka aan ku kalsoonayn waxa uu naftiisa samayn karo; Rajadaas wuu ka hadhay, oo naftiisii ​​way iska dhiibtay, oo sidii la odhan jiray, isaga qudhiisaa wuu dhintay oo dambiisha ayuu ku jiifsaday albaabka Ilaah hortiisa.
Dheh "haa!" xagga Eebbe "haa!"
Waa inaan ka tagno aragtida khaldan ee ah in toobadku uu yahay ballan qaad aan mar dambe dembaabin. Ugu horreyntii, ballanta noocan oo kale ah maahan uun hawo kulul. Marka labaad, waa mid aan macno lahayn.
Ilaah wuxuu ku siiyay xoog, xoog, onkod, weligiis "haa!" Ku dhawaaqay dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix. Toobaddu waa “haa!” Jawaabta Ilaah “haa!”. Waa u leexashada xagga Ilaah inuu ku aqbalo ducadiisa, ku dhawaaqidiisa saxda ah ee dambi la'aantaada iyo badbaadadaada Masiixa.
Aqbalida hadiyaddiisa macnaheedu waa inaad qirato xaaladaada dhimashada iyo baahidaada nolosha weligeed ah. Waxay ka dhigan tahay in aad isaga aaminto, aad isaga rumeyso oo aad iska dhigto naftiisa oo dhan, jiritaankaaga, jiritaankaaga - wax kasta oo aad tahay - gacmihiisa ku jiro. Waxay ka dhigan tahay inaad ku nastid iyo culayskaaga kaa siiso. Markaa maxaad ugu raaxaysan weyday oo aad ku nasan lahayd nimcada hodantinimada leh iyo Khasnadaha Rabbigeenna iyo Bixiyahayaga? Isagu wuu soo furtaa kuwii lumay. Wuxuu badbaadiyaa dambiilaha. Wuxuu soo toosiyaa kuwa dhintay.
Isaga waa nala jiraa, maxaa yeelay isagu wuu jiraa, waxna isma dhex taagi karo isaga iyo innaga - maya, xitaa dembigaaga murugada leh ama kan deriskaaga. Aamin isaga. Tani waa war wanaagsan annaga oo dhan. Isagu waa eraygii waana yaqaanaa waxa uu ka hadlayo!